“မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဟိန်းမင်းသူ” - Myanmarload
“မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ဟိန်းမင်းသူ”
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 13:04 October 30, 2017
အဆိုတော်ချောလေး ဟိန်းမင်းသူဟာ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်..။ အောက်တိုဘာ(၂၉)ရက်နေ့မှာ Fan အချို့နှင့် အတူ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ “ရီမာပရဟိတမိဘမဲ့ကျောင်း” မှာ မိဘမဲ့ကလေးများအတွက် နေ့လည်စာ၊ ဆန်၊ ဆီ နှင့် အအေး ပဲနို့ အာလူးကြော် ပေါင်မုန့်နှင့် စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်များ အာဟာရဖြည့်စွပ်စာများ နှင့် အခြားစားနပ်ရိက္ခာများကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ မွန်မြတ်တဲ့အလှူ ဒါနလေးကို ပရိသတ်များလည်း ပြန်လည်မျှဝေထားရင်း အခြားစေတနာရှင်များလည်း “ရီမာပရဟိတကျောင်း” လေးမှာ ကလေးငယ်လေးများအတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထားပါတယ်..။
ယနေ့ အောက်တိုဘာ(၃၀)ရက်နေ့မှာ အဆိုတော်ချောလေး ဟိန်းမင်းသူက သူအသုံးပြုတဲ့ fb စာမျက်နှာမှာ အခုလို ရေးသားထားပါတယ်..။ “မနေ့က အလှူမှာဆန် ၄အိတ် ဆီ ၄ဗူး နောက်နေ့နေ့လည်စာ အအေး ပဲနို့ အားလူးကြော် ပေါင်မုန့် ပညာသင်စားရိတ်ပြီးတော့ fans လေးအချို့ထပ်လှူတဲ့ စာအုပ် ဘောပင်ခေါက်ဆွဲခြောက် တွေမနေ့က ရီမာမိဘမဲ့ကျောင်းလေးမှာလှူခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းလေးကအနည်းငယ် ဘဲအလှူရှင်တွေရှိတာပါ ကျွန်တော့်ပရိတ်သတ်အချို့သွားရောက်လှူဒါန်းချင်လဲလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကုသိုလ်ကိုအားလုံးထပ်တူရကြပါစေဗျာ ❤️ ?
အလှူမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ fans လေးတွေကိုလဲကျေးဇူးပါဗျ..။” လို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။
လှူဒါန်းမှုများနှင့်အတူ ကလေးငယ်လေးများကို တေးသီချင်းများနှင့်လည်း သီချင်းဖျော်ဖြေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်..။ မိဘမဲ့နေတဲ့ ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်တဲ့ နွေးထွေးမှုများလည်း ပေးခဲ့ပြီး ကလေးငယ်များကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။ အဆိုတော်ဟိန်းမင်းသူဟာ တေးသီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားပြီး ပရဟိတ စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ ဟိန်းမင်းသူကို ပရိသတ်တွေကတော့ အချစ်ပိုစေခဲ့ပါတယ်..။ လတ်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ အနေနဲ့ကတော့ အခမ်းအနားပွဲများ တတ်ရောက်ခြင်းနဲ့ တေးသီချင်းတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်..။ တေးသီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေဆီ ရောက်ရှိလာဦးမယ့် အဆိုတော်ချောလေး ဟိန်းမင်းသူကို အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ပဲလား… ပရိသတ်ကြီး..
Page generated in 0.0980 seconds with5database query and6memcached query.